Inkazimulo zezindiza Russian nizalwa kuthule Amahhovisi design, phakathi romantics pragmatic owanika umuntu amaphiko futhi wafundisa imishini ezinkulu hhayi kuphela ukundiza, kodwa futhi ukubhukuda. Ochwepheshe of PJSC Beriev Aircraft Company. G. M. Berieva izindiza ezisebenza eminyakeni engaphezu kwengu-80 futhi phakathi naleso sikhathi ngikudalile ezizukulwane eziningana zezindiza.
Ukuze kwesimo endaweni futhi impi
ETaganrog Aviation Scientific-Technical Inxanxathela yaqanjwa Berieva G. M. yasungulwa ngo-October 1, 1938. Ikhanda lokuqala enhlanganweni kwaba Beriev Georgiy Mihaylovich, ogama lakhe kwakuthiwa kamuva ezabiwe eziyinkimbinkimbi. Eminyakeni eyandulela impi, onjiniyela kanye nabaqambi izikhungo Kwamiswa izindiza "MBR-2", senzelwe short-range kwesimo endaweni zasolwandle prototype Beriev owabadala ngo-1932. Futhi uphumelele kwaba ukukhululwa kwe ngendiza womkhumbi "CDF-1" futhi "CDF-2", okuyinto wethulwa ebhanoyini ngosizo catapult lomkhumbi. Bobabili imishini ziye bahileleke neMpi Yezwe II.
Ngemva kwempi, kwadingeka ukuvikela imingcele emoyeni. I Beriev Aircraft Company. Beriev wahlanganyela ukuthuthukiswa isikebhe ezindizayo "Yiba-6". Umqondo yaphumelela, futhi kwahlelwa ukukhiqizwa, okwaqala ngo-1956. Vele wabona ukukhanya 123 amakhophi "Yiba-6", ekhishwe 19 chungechunge, ukukhiqizwa eyathatha iminyaka 5.
Iminyaka yangemva kwempi
Eminyakeni pyatidisetye ekhishwe Jets, nge kokwehla aqueous "Yiba-10". Bakhandwa zenzelwe imiphumela yesikhathi eside ezayo kwesimo endaweni nge ikhono zibhubhisa futhi torpedoes at Okuqondiwe olwandle, lezisekelo yemikhumbi yempi izindawo. Futhi kudingeka ikhono ukusungula zenkulumo izindiza kwezimayini ngaphansi kukahulumeni. ukukhiqizwa serial izilwane zasemhlabeni waqala ngo-1957.
Umsebenzi kwakwenziwa ngesikhathi esihamba phambili. Umklamo sasisibi futhi onjiniyela Beriev Aircraft Company. G. M. Berieva babe naye njalo acwengekile. Ngo-October 1961, lolu hlobo izindiza kwaba nenhlekelele: ngesikhathi kubukiswa emoyeni e Moscow, omunye wabo iphahlazeka. Indiza ayizange yamukelwe inkonzo, amayunithi 30 kuphela zavezwa "Yiba-10." Naphezu kokushiyeka abalulekile "Yiba-10" waba impumelelo. Ngalo wakhululwa amarekhodi emhlabeni nambili, ebaluleke kunayoyonke zazo - irekhodi ijubane ngoba izindiza abahlala kokubili emanzini nangaphandle (912 km / h) washaywa okwamanje. Imodeli iye empini ngo-1968 ngokuphelele.
Thuthukisa iminyaka 60-80
Ngo-1968, umklami lokuqala induna G. M. Beriev babehambile ngeholide, esilinganisweni kwaba kudingekile - impilo kuhlulekile. Okwamuva ukuthuthukiswa bureau beqondiswa master izindiza kwaba ezisetshenziswa umphakathi "Yiba-30", ke uvinjelwe ukukhululwa zenqubomgomo. Eminyakeni 25, sabuyela lo mqondo futhi usisebenzise. Airplane "Yiba-32K" waba ilungu Paris Umbukiso lwabangela ukuba phakathi umkhakha izazi ezingeni lomhlaba wonke jikelele.
Esikhathini yoma ngasekupheleni igama Beriev G. M. Berieva ekusebentiseni lunye entsha - ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa eziyinkimbinkimbi radar isixwayiso nesiqondiso, "A-50", kanye nokuthuthukiswa kwezinhlelo ezenziwe "Tu-142MR", ukuhlinzeka ubuhlobo ultra-eside. Isisekelo kubo kwakumelwe bakhonze njengabakhulumeli emi phezu izikhali izindiza. Esikhathini esifanayo ehhovisi design waqala umsebenzi ukudalwa indiza esiyingqayizivele, zaba ukuziqhenya izindiza Russian - jet superheavy "A-40".
"Albatross", noma "A-40" - lena phrojekthi eside egijima kakhulu Beriev Aircraft Company. Beriev Aircraft Company, kamuva elaba umuzwa. Ngesisekelo KB benziwa prototypes ezimbili. I izindiza waqala ngo-1987, umlando wayo, "Albatross" umise 143 emhlabeni irekhodi indiza, zonke nemibukiso, waba isasasa. imodeli Military "A-40" ngamathuluzi bazivumelanisa ukuthuthwa amathani angaphezu kuka-6 amabhomu, torpedoes nezinye izikhali.
wenzuzo yayo ngo-90s okuqala aba baxoxisana amazwe ehamba phambili angaphandle. Britain uzwakalise enenhloso yokukhukhula esikhundleni patrol izimoto zawo eziphila ezweni "A-40". Kodwa isikhathi lapho izinqubo ukuxoxisana kwaba obumbi eRussia. ubuholi Navy yazise Bureau okuthiwa. Beriev ukumisa izimali futhi kungekho isidingo empini ngasendle izindiza alesi sigaba.
I Pao Beriev Beriev esakhiwe izinguqulo ezintathu kule modeli - umgibeli, wezimpahla zokutakula umgibeli gumbi imodeli yakhelwe abagibeli 105. Amakhasimende kanye abathengi kulezi izindiza akuyona kahle. Ngesikhathi esifanayo KB bakholelwa ukuthi lesi simo zizoshintsha zibe ngcono, ngoba "Albatros" - lo amphibian ekahle ukusetshenziswa ekukhiqizeni uwoyela negesi eshalofini.
Kuze kube manje, Beriev Aircraft Company. Beriev Aircraft Inkampani Kutfutfukisa nokobana seaplanes ngoba sphere eziningi umsebenzi nezomnotho kuleli zwe. Ngesisekelo le-Irkutsk Aviation Enterprise lwenzelwe izindiza "Yiba-200" Multi-ukusetshenziswa:
Ngoba Izimo eziphuthumayo Senkonzo.
izinjongo nemililo (ebhodini kuthatha amathani 12 amanzi).
Freight futhi engasetshenziswa umgibeli.
Inkampani seaplanes ethuthukisiwe "Yiba-12", osuvele ekugqokeni out imililo Chukotka, e-esifundeni sase-Irkutsk, enhlonhlweni yaseCrimea. imodeli Ezokuthutha "Be-12NH" iye yasetshenziselwa eNyakatho Ekude yeCanada, isetshenziselwa wezimpahla zokuthutha ku Sakhalin, le Kuril Islands.
Omunye ubunjiniyela ngentuthuko yakamuva Design Bureau. Beriev waba ngendiza "Yiba-103" - imodeli lula tekutfutsa bagibeli (abantu 5-6). On yokusondela ukuqaliswa kwe "BE-112", "BE-114", a hydroplanes ngombono isiqondiso zinde off mass amathani angaphezu kuka-1000.
Association kanye nemisebenzi
Ngo-2011, Beriev Aircraft Company. Beriev isananyathiselwe JSC "Tavia." I ibhizinisi eba entsha imishini zezindiza models ezimakethe Russian angaphandle. imisebenzi Main:
Ucwaningo (lokuhlola, theory) ekwazi ukumelana namandla omoya, hydrodynamics, imishini, design ngezinto zokwakha zezinga eliphezulu zezindiza.
Kutfutfukiswa onobuhle ezintsha zezindiza nemikhumbi-imishini.
Certification futhi indiza ukuhlolwa kwe-ubuchwepheshe obusha.
Ukwethulwa ukukhiqizwa serial izindiza kwenjongo ezahlukene.
Ukufundiswa nokuqeqeshwa kwabasebenzi lobuchwepheshe futhi indiza.
Ukusekela yokuthengisa Technics (eluleke ezesayensi, ukulungiswa kanye nokunye.).
Yokuqasha bezindiza nokunye.
Mayelana Beriev Aircraft Company. Beriev abantu abanentshisekelo ukwakhiwa izindiza kanye umkhakha ukuthuthukiswa, okubuyayo kuphela. Iningi amathemba ephezulu ukuvuselelwa ukwakhiwa mass seaplanes futhi ubheka lokhu njengesibusiso mkhuba omuhle. Ukwahlulela ngokubukeka imibiko yabezindaba, KB enikeziwe umsebenzi iminyaka eminingi, okhombisa efaneleyo eliphezulu abasebenzi kanye nokuncintisana imikhiqizo.
Ucwaningo olusemthethweni kwabasebenzi umbono wokugcina kwenzeka ngo-2007, kusukela lapho isimo sesishintshile kakhulu. Inhlangano waqala ukusebenza namazinga amazwe omhlaba, ukubamba isitifiketi ezifanele futhi wamukele oda kusukela IMF Russia.
Indlela yokuvula esitolo: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Isifo chlamydia: izimbangela